Ngaba iYiputa yiNtando yeninzi?
Imbali kunye neNkcubeko Jiphethe
Iinkqubo zezobupolitika eMbindi Mpuma
IYiputa ayisekho ngentando yesininzi, nangona inkulu enkulu yokuvukela umbuso we- Arab Spring ka-2011 owasusa umkhokeli waseYiputa ode, uHosni Mubarak, owaye walawula ilizwe ukususela ngo-1980. IYiputa iqhutywe ngempumelelo ngumkhosi, oye wamisa Umongameli wamaSulumane ngoJulayi 2013, kwaye wanyula umongameli wesikhashana kunye nekhabhinethi karhulumente. Ukhetho kulindeleke ngelo xesha ngo-2014.
Inkqubo kaRhulumente: I-Regime-Run Run
IYiputa namhlanje ibutho lolawulo lobukhosi kulo lonke igama kodwa, nangona umkhosi uthembisa ukubuyisela amandla kubapolitiki abahlali ngokukhawuleza ukuba ilizwe lizinzile ngokwaneleyo ukuba lenze ukhetho olutsha. Ulawulo lolawulo lwezempi luye lwamisa umgaqo-siseko ovunyiweyo ovunywe ngo-2012 ngumbononongo odumile, waza wachitha indlu ephezulu yepalamente, umbutho wezomthetho wokugqibela waseYiputa. Igunya elilawulayo lisemthethweni kwisigqeba sesigxina, kodwa akukho nto iyanceda ngayo ukuba zonke izigqibo ezibalulekileyo zigqitywe kwisigxina esincinci samagunya omkhosi, izikhulu ze-Mubarak-time, kunye neentloko zezokhuseleko, eziholwa ngu-General Abdul Fattah al-Sisi, intloko yomkhosi kunye nomphathiswa wokhuselo wenkundla.
Amanqanaba aphezulu enkundla axhasa inkxaso ye-military ye-Julayi ka-2013, kwaye akukho phalamente eninzi kakhulu iisesheke kunye nezilinganiso kwindalo ye-politiki ka-Sisi, eyenza ibe ngumlawuli we-Egypt.
Amajelo aseburhulumenteni aphethele i-Sisi ngendlela ekhumbuza ngexesha le-Mubarak, kwaye ukugxeka kwe-heroman entsha yaseYiputa kwenye indawo ichithwe. Abaxhasayo baka-Sisi bathi umkhosi ulondoloze ilizwe ukusuka kulawulo lobukhosi lobuSulumane, kodwa ikamva lelizwe libonakala lingaqinisekanga njengoko kwakunjalo emva kukaMubarak ngo-2011.
Abadlali abaPhambili bezoPolitiki eYiputa
Ukungaphumeleli kweNzululwazi yeDemokhrasi yeJiputa
IYiputa iye yalawulwa ngurhulumente olawulayo olandelelanayo ukususela ngowe-1950, nangaphambi ko-2012 bonke abathathu abaphathi-uGamal Abdul Nasser, Mohammed Sadat, kunye noMubarak - baphume emkhosini. Ngenxa yoko, umkhosi waseYiputa wahlala ebambe indima ebalulekileyo kwizopolitiko nakwezoqoqosho. Umkhosi wawukuhlonipha ngokubanzi phakathi kwamaYiputa aqhelekileyo, kwaye kwakungazange kumangalise ukuba emva kokubhuqa kukaMubarak ngabaphathi baqala ukuthatha ulawulo lwenkqubo yokuguquka, baba ngabagcini be-"revolution" ka-2011.
Nangona kunjalo, ukuzamazama kwedemokhrasi kwangoko kwenyuka kwintlekele, njengoko kwacaca ukuba umkhosi wawungekho ukukhawuleza ukuba uthathe umhlalaphantsi kwezopolitiko ezisebenzayo. Unyulo lwamaPalamente lwagqitywa ekupheleni konyaka ka-2011 olulandelwa ngabavoti kamongameli ngoJuni 2012, ukunika amandla ininzi yama-Islamist elawulwa nguMongameli Mohammed Morsi kunye nomzalwana wakhe ongumSilamsi. UMorsi watshitshisa intsebenziswano yamabutho, apho abaphathi bezemfundo baphuma kwimicimbi yamarhulumente ngemihla, ngokubambisana nokugcina umgaqo-nkqubo wokukhusela kunye nemibandela yokhuseleko lwesizwe.
Kodwa ukukhula okungazinzi phantsi kweMorsi kunye nosongelo lweengxabano zombambano phakathi kwamaqela angamazwe kunye namaSulumane kubonakala ukuba bakholelwa ukuba abaphathi bezombusazwe bezitshintshe ukutshintsha.
Umkhosi wawususa uMorsi emagqabini enkundleni ekhutshwe ngokuthandwayo ngoJulayi 2013, iinkokeli eziphezulu ezibanjwe kwiqela lakhe, kwaye zachithwa ngabaxhasayo babengumongameli wangaphambili. Uninzi lwamaYiputa lwalungelelanisa ngasemva komkhosi, lukhathele ukungazinzi kunye nokuxhamla kwezoqoqosho, kwaye lwahlukana nokungazi kakuhle kwezopolitiko.
Izizathu ezi-5 zeNkqubela yeJiputa
Ngaba amaYiputa afuna idemokhrasi?
Bobabini bamaSulumane kunye nabaphikisi babo belizwe bavuma ngokubanzi ukuba iYiputa kufuneka ilawulwe yinkqubo yenkqubo yentando yesininzi, kunye noorhulumente abakhethwe ngonyulo olukhululekile nolungileyo. Kodwa ngokungafani neTunisia, apho ukuphikisana okufanayo nokunyanzelisa ulawulo kubangele ukusebenzisana kwamaqela amaSulumane namazwe, amaqela ezopolitiko aseYiputa ayengenakufumana umgangatho ophakathi, okwenza ipolitiki ibe ngumdlalo onobundlobongela. Ngesinye igunya, uMorsi otyunjwe ngentando yeningi wenza ngokugxeka kunye nokubhikisha kwezopolitiko kudla ngokukhupha ezinye zeendlela ezixinzelelekileyo zolawulo lwangaphambili.
Ngokudabukisayo, eli lizwe elibi lenze amaYiputa amaninzi avume ukwamukela ixesha elingenammiselo lolawulo olusemgangathweni, okhetha inkqonkqo ethembekileyo kwiintolitiki zepalamente. U-Sisi uye wabonisa ukuba uyathandwa kakhulu ngabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi, abaziva beqinisekisiwe ukuba umkhosi uya kumisa i-slide kwi-extremism yenkolo kunye neentlekele zezoqoqosho. Idemokhrasi epheleleyo eYiputa egxininiswe ngumgaqo wemiyalelo ixesha elide.
UBukumkani obudala: Ixesha elidala loBukumkani baseYiputa
IiPiramidi eziphambili zaseYiputa
Ixesha laseYiputa loBukumkani baseMpumalanga
ICleopatra YokuFunda Isikhokelo
Umlambo iNayile kunye neNayile Delta eYiputa
Ngaba amaYiputa aseMandulo ayidla ntoni?
U-Sobek, i-Crocodile uThixo waseYiputa wamandulo
Isihlandlo seZiganeko ezinkulu kwiBomi leCleopatra
IYiputa yaseYiputa yasendulo
Imigaqo yamandulo yaseYiputa yabantwana
Yintoni i-Sphinx enkulu?
I-Redstockings iqela lamaqela aMaqela
Ukugqibela kokuBhaliswa kweMpawu zoTywala?
IziJongo ezilula zamaJamani
Eyona ndlela ihamba phambili yoTshani-i-Winter All-Season Tires ngo-2013
IsiNgesi ngeenjongo zezoNyango - Ukwenza utyunjwa loDokotela
IYunivesithi yaseQueens yaseCharlotte Admissions
I-Italian Music Glossary yePiano
Iidrafri zengxelo ngeNdalo kunye ne-Ecology
I-Texas ye-A & M ne-Admissions Statistics
Projects Craft Mabon
I-Evander Holyfield Career Record
Mayelana ne-Bowfin - Ixesha eliqhelekileyo, kwaye linqabile, Qamba
'IJungle Book' nguRudyard Kipling Review
Ukuphononongwa kwe-Goodyear Ultra Grip Ice WRT
Yintoni i-Pink-Collar Ghetto?
Iingcaphuno ezivela ku 'Black Black' nguEdgar Allan Poe
Imfazwe yaseMerika: iMandla Jikelele uDaniel Harvey Hill
Funda iFrench Word Sinon
Umlingo & Uphawu lwezilwanyana
Sewanee - iYunivesithi yaseMzantsi South Admissions